Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Afrika sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Untold
Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL
Ciyaartoy kasta oo Afrikaan ah wuxuu helaa sheekooyinka Carruurnimada oo ay ka buuxaan wakhtiyo aan la ilaawi karin oo labadaba xiiso iyo taabasho ah. Hadafkayagu waa inaan kuu sheegno Dukaanada Nolosha Hore iyo sidoo kale Ciyaartoyda Kubadda Cagta Afrika ee Xaqiiqda.
Maxaa diirada loo saaray Astaamaha Ciyaartoyda Kubadda Cagta Afrika oo lagu daray Taariikh nololeed?
Daacada oo dhan, waxaan tan u sameyneynaa sidii aan u xalin laheyn dhibaato caan ah oo ka jirta kubada cagta Afrika. Dhawaan, waxaan gaarnay farqi xagga aqoonta ah oo ku saabsan adduunka oo dhan, kaas oo laxiriira maqnaanshaha macluumaad abaabulan oo ku saabsan cayaartoyda Afrikaanka ah marka loo eego sheekooyinka noloshooda hore.
Si loo soo afjaro farqiga noocan ah, LifeBogger sanadka 2016 wuxuu go’aansaday inuu dejiyo hawlgal si caadi ah loogu gudbinayo sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikhda Kubadda Cagta Afrika.
Mawduucyadeenna Kubadda Cagta Afrika:
Dhamaan qoraalada ku saabsan cayaartoyda kubada cagta ee qaarada ayaa loo diyaariyay inay muujiyaan qulqulka macquul ahaanshaha sheekada. Mawduucyadayada afrikaanka ah ayaa kuu sheegaya kuwa soo socda.
Marka ugu horreysa, waxaan u sheegnaa sheekooyinka carruurnimada ee ciyaartooyda Afrikaanka ah, laga bilaabo waqtiga dhalashadooda iyo ka dib, waaya-aragnimada nolosha hore.
Waxaan kuu soo qaadanaa macluumaad ku saabsan asalka qoyska iyo asal ahaan Cayaaryahannada Kubadda Cagta Afrika. Tan waxaa sidoo kale ku jira macluumaad ku saabsan waalidkood (hooyooyinka iyo aabaha).
Waxaan kuu sheegeynaa wax qabadkii Nolosha Hore ee horseeday dhalashada shaqooyinka Kubadda Cagta Afrika.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan kuu sheegeynaa khibradaha ay leeyihiin ciyaartoydii Kubadda Cagta ee Afrikaanka ay la kulmaan muddadii ay soo tababarteen.
Wadadayaga Taariikhda Caannimada ah wuxuu kuu keenayaa 'Bartilmaameedka' ee xirfadda dhalinyarada ee Ciyaartooyda Afrikaanka ah.
Sheekada 'Rise to Fame Story' waxay sharxaysaa sheekooyinka Guusha ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta Afrika.
Waxaan sii wadaynaa inaan kula socodsiinno xiriirka xiriirka kubada cagta Afrika. Si kale haddii loo dhigo, macluumaad ku saabsan Gabdhahooda iyo Haweenkooda.
Tan ku xigta waa Xaqiiqooyin kusaabsan Nolosha Shaqsiyadeed ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta Afrika.
Waxaan sidoo kale kugu baraneynaa xubnaha qoyska Kubadda Cagta Afrika iyo sidoo kale xiriirka ay is leeyihiin.
Kooxdayadu waxay sii deynsiisaa Lacagihii Kubbadda Cagta ee Afrika, qiimahooda saafiga ah iyo qaab nololeedkooda.
Ugu dambeyntiina liiska, waxaan kuu soo qaadanaa Xaqiiqooyin aan waligiis laga aqoonin oo ku saabsanaa kubbadda cagta Afrika.
Illaa iyo hadda, waxaan u kala jajabnay Qaybtayada Afrikaanno qeyb hoosaadyada soo socda. Waxay ka mid yihiin;
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ghanan
Markaad aqriso maqaalkan, waxaad ogaan doontaa in LifeBogger rumeysan tahay fikradda ku biirinta aqoonta aqoonta caadiga ah ee gaarsiinta Sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka Ciyaartoyda Kubadda Cagta Afrika. Anaga ahaan, kaliya ma ahan daawashada Kubadda cagta laakiin ogaanshaha sheekooyinka ka dambeeya magacyada garoonka dhexdiisa.
In kasta oo aan ku dadaalno saxsanaan iyo caddaalad, naxariis Nala soo xiriir hadaad u fiirsato wax qalad ah, khaladaad ama halista ah mid ka mid ah qoraaladeena ku saabsan Ciyaartooyda Afrikaanka ah.
Ugu dambeyntiina, aan idin soo bandhigno sheekooyinka Carruurnimada iyo Taariikh nololeedka Ciyaartoyda Kubadda Cagta Afrika.
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Juun 16, 2020 0
Kalidou Koulibaly Sheeko Xeel dheer oo Xogta Laga Qaadanayo
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Janaayo 24, 2019 1